Wararka - Soo koobo habka shaqada iyo taxaddarrada mashiinka keegga birta birta ah
Soo koobo habka shaqada iyo taxaddarrada mashiinka keega ee birta ah
Xiirashada biraha waa nooc ka mid ah qashinka la soo saaro ka dib marka la farsameeyo alaabada birta ama qaybo ka mid ah. Waa alaabta ceyriinka ah ee soosaarka bir tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, waxay ubaahantahay in qabow lagu cadaadiyo mashiinka keegga ee xiiraya birta. Sababtoo ah dad badani ma yaqaanaan habka shaqada ee qalabka, hawsha iyo habka loo adeegsado Waxaa jiri doona cilado iyo dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan geedi socodka. Hoos waxaan kugu hogaamineynaa inaad fahanto: nidaamka shaqada iyo taxadarka mashiinka keegga birta birta ah.
1. Qalabka shaqada
Nidaamka loogu riixayo jajabka birta ah keega waa geedi socodka cadaadiska tooska ah ee qabow iyo extrusion. Inta lagu guda jiro hawsha kala-bixinta, looma baahna in la kululeeyo ama wax lagu daro. Waa lagama maarmaan in lagu xusho qalabka taageerada ee lagama maarmaanka u ah iyadoo loo eegayo cabirka iyo qaabka qashinka birta ah. Haddii qashinka birta ah ay yihiin jajabyo cabirkoodu isku wada siman yahay, qashinka birta ah waxaa si toos ah loogu quudi karaa mashiinka mashiinka duugga ah ee birta ah iyada oo loo sii marinaayo qalabka wax lagu raro, qashinka birtana waxaa lagu sifeeyaa habka quudinta Waxay buuxisaa caaryada oo waxay ku riixdaa a keega cufnaanta badan leh oo lagu sameeyo silsilad sameysmaya, ka dibna keegga keegga waxaa hoos u dhigaya silsiladda soo-saarista oo laga fogeeyaa qalabka.
Haddii xiirashada biraha ay dheer yihiin ama weyn yihiin, waxaa lagama maarmaan ah in la mariyo jajabka si loogu burburiyo xiirashada biraha qayb jajab ah, ka dibna iyaga loogu cadaadiyo qaab waafaqsan tallaabooyinka kor ku xusan. Maadaama qashinka birta ah xoogaa la tuurayo, way fududahay in si siman loo qaybiyo ama la xakameeyo caaryada inta lagu gudajiro nidaamka qaybinta. Waxaan ku rakibi karnaa qalab xamuul ah oo xamuul qasab ah mashiinka keega duugga ah, kaas oo si weyn u wanaajin kara waxqabadka iyo tayada qalabka.
2. Taxadarka shaqada qalabka
1. Xiirashada birta ee maaddooyinka iyo darajooyinka kala duwan waa in si gooni gooni ah loo cadaadiyo. Lama isku qasi karo oo lama qasi karo. Tani kaliya ma hagaajin doonto tayada keega la sameeyay, laakiin sidoo kale waxay kordhin doontaa nolosha adeegga qalabka;
2. Xiirashada biraha waa in la nadiifiyaa ka hor inta aan la riixin, gaar ahaan ciidda, xijaabyada, iwm. Waa in aan lagu dhex qarin biraha;
3. Xaalada qashinka birta ah ee saliiddu kujirto, saliida qashinka waa in la sifeeyaa lagana saaraa si looga fogaado inay saameyn ku yeelato tayada keega la sameeyay;
4. Cadaadisyo kala duwan waa in loo xusho mashiinka keegga birta birta ah si loo xakameeyo jajabyada birta leh wasakhda kala duwan. Markaad hagaajineyso cadaadiska, waa in lagu hagaajiyaa shuruudaha soo-saaraha, mana lagu hagaajin karo sida ay rabto;
5. Inta lagu guda jiro hawsha shaqada ee mashiinka keega jajaban ee birta ah, fiiro gaar ah waa in la bixiyaa wakhti kasta. Hadday qalabku leeyihiin daadashada saliidda ama cadaadis aan degganeyn, waa in dib loo cusboonaysiiyaa waqtigeeda si looga fogaado ballaarinta cilladda.
Kahor intaadan iibsan ama soo saarin, waa inaad ku xeel-dheeraa fahamka iyo hanashada habka shaqada iyo taxaddarrada mashiinka jarista birta. Markaad qalabka u shaqeyneyso si sax ah, waa inaad marwalba fiiro gaar ah u yeelato howlaha qalabka. Xaalado badan oo aan caadi ahayn waa inay jirtaa qaab farsameyn waqtigeeda leh.
Sheet Birta Baler, Mashiinka Birta Briquette, Baler Xadhig Baler, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger,